Rocstor Data Recovery: Olee naghachi Data si Rocstor Draịvụ r
> Resource> Naghachi> Rocstor Data Recovery: Olee naghachi Data si Rocstor Draịvụ
Enwere m ike Naghachi faịlụ site Rocstor Draịvụ?
M nwere Rocstor obere ike mbanye nke e ji mee ihe ruo ogologo oge. M echekwara ọtụtụ foto na vidiyo na ya. Ụnyaahụ m mmadụ na mberede formatted ya. Na m na-adịghị ihe ọ bụla mbipụta nke faịlụ na ya. Ọ ka kwe m omume ga-esi m faịlụ azụ?
Mberede nhichapụ na formatting isi ihe abụọ kpatara maka ike mbanye data ọnwụ. Otú ọ dị, ị ka nwere ụzọ iji weghachite furu efu data gị Rocstor ike mbanye. Echefuola faịlụ na-dị nnọọ akara dị ka keerughi data na draịvụ ike gị. Dị ka ogologo oge nke furu efu faịlụ adịghị e overwritten site ọhụrụ faịlụ, inweta ha azụ dị ukwuu.
Nke a pụtara na ị chọrọ ịkwụsị iji draịvụ ike gị ma na-a Rocstor data mgbake omume ozugbo ọ bụrụ na ị chọrọ iji naputa furu efu data. Wondershare Data Recovery, Ma ọ bụ Wondershare Data Recovery for Mac bụ nri ngwa na gị mkpa. Nke a na usoro-enyere gị aka naghachi data si Rocstor ike mbanye n'ime nanị ole na ole mfe clicks. Ọ bụrụ na faịlụ gị Rocstor ike mbanye furu n'ihi nhichapụ, formatting, faịlụ nrụrụ aka, usoro njehie ma ọ bụ ọbụna virus agha, ị nwere ike ozugbo were nke a ngwá ọrụ dị ka a na-agwọ. Kasị ịtụnanya atụmatụ nke a usoro bụ na ọ chọta ihe fọrọ nke nta niile faịlụ ụdị si gị Rocstor ike mbanye, gụnyere image, video, audio faịlụ, akwụkwọ faịlụ, wdg
Ị nwere ike ibudata a ikpe mbipute nke Wondershare Rocstor data mgbake omume na-weghachite gị furu efu data ugbu a! Na nke a ikpe mbipute, ị nwere ike iṅomi gị Rocstor ike mbanye na preview aha nke hụrụ faịlụ elele ma gị furu efu data nwere ike natara ma ọ bụ.
Igosi Rocstor Data Recovery na 3 Nzọụkwụ
N'ebe a, anyị ga-hazie mgbake na Windows version nke Wondershare Data Recovery. Mac ọrụ nwekwara ike na-eso yiri ọrụ na Mac version kwa.
Nzọụkwụ 1 Họrọ a mgbake mode iji weghachi data si Rocstor ike mbanye
Mgbe wụnye ad agba ọsọ usoro ihe omume gị na Windows kọmputa, ị kwesịrị iji họrọ a mgbake mode mbụ.
Naghachi furu efu, ehichapụ ma ọ bụ formatted faịlụ site na gị Rocstor ike mbanye, ị nwere ike họrọ "Echefuola File Iweghachite" dị ka a mbụ na-agbalị.
Cheta na: Ọ bụrụ na ị na-aga na-agbake data si a Rocstor mpụga ike mbanye, biko jide n'aka na ọ pụrụ-ọma-ejikọrọ na kọmputa gị.
Nzọụkwụ 2 iṅomi gị Rocstor ike mbanye ịchọ furu efu faịlụ
Ebe a ị dị nnọọ mkpa họrọ gị Rocstor ike mbanye na pịa "Malite" button m na windo ka usoro ihe omume ike iṅomi ya.
"Kwado Deep iṅomi" bụ ihe nhọrọ maka gị na-agbake data si a formatted Rocstor ike mbanye.
Nzọụkwụ 3 Naghachi faịlụ site na Rocstor ike mbanye
Mgbe scanning, niile hụrụ faịlụ gị Rocstor ike mbanye ga-egosipụta na window. Ị dị nnọọ mkpa akara faịlụ na ị chọrọ iji naputa na pịa "Naghachi" zọpụta ha azụ gị na kọmputa.
Cheta na: Biko adịghị zọpụta faịlụ azụ gị Rocstor ike mbanye ozugbo ke mgbake.
Video na Notes ehichapụ! Olee otú iji naghachi?